Hetsiky ny TIM Antsirabe
Vatofotsy no nomen’ny Prefet
Vatofotsy no toerana nomen’ny Prefen’Antsirabe hanatontosana ny hetsiky ny Tim Antsirabe anio sabotsy 28 may 2022, anatin’ny faritra Vakinakaratra. Tonga any an-toerana koa ny filoha mpanorina ny antoko Tim, hanatrika izany. Vonona ny handray ny fepetra amin’ny fandriampahalemana ny Governoran’ny Faritra ao Vakinakaratra sy ny mpitandro filaminana raha misy ny fihoaram-pefy hitranga.
Tetikasa hampivoatra ny fiaraha-monina.
Vola mitentina 12,4 tapitrisa dolara avy amin’ny fanjakana amerikana sahanin’ny USAID , no namatsiana ny Miarakap. Notanterahana omaly zoma 27 may 2022 ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny tetikasa “Mitsiry” tetsy Anosy. Araka ny tanjon’ny orinasa Miarakap dia ny hampivoatra ny fiaraha-monina sy ny hanatsarana ny tontolo iainana ny toy izao. Dimy taona ny faharetan’ny fiaraha-miasa (fanampiana ara-bola) amin’ireo drafi-pampandrosoana ataon’ny orinasa madinika sy salantsalany (Petites et Moyennes Entreprises). Izany dia ho fampivoarana ny fiaraha-monina sy ny tontolo iainana eo amin’ny sehatra ara-toe-karena.
Malagasy any ivelany
Mitohy ny fanaovana asa soa
Tsy nanadino ny mpiray tanindrazana aminy, indrindra fa ireo marefo ara-pivelomana ny Malagasy any ampitan’ny ranomasina, ka mponina miisa 2500 amin’ny 500 tokantrano no nisitraka ny fanampiana asa soa avy amin’ny federasionan’ny fikambanana Malagasy monina atsy amin’ny Nosy Mayotte (FA.M.M.). Nitsirika mivantana tany amin’ny distrikan’Ambovombe Androy ny solotenan’ireo mpikambana, ka samy nisitraka ny fitsinjarana ny entana fampiasa andavanandro vokatry ny tsy fahampian-tsakafo ny tao Ankilemiofiky, Tsilavadambo, Ankilemamy, Bevato ary Sarehange. Ny tao amin’ny BNGR no nandray an-tanana izany.